Kulan qarsoodi ah oo looga hadlayo aayaha Commonwealth, Elizabeth ka dib – Kasmo Newspaper
Updated - February 13, 2018 9:50 pm GMT
London (Kasmo), Dalalka isku bahaystay Ururka Barwaaqo-sooranka ‘Commonwealth’ ayaa bilaabay in ay si qarsoodi ah u wajahaan cidda ka beddeli doonta Guddoomiye-nimada, marka ay geeriyooto Elizabeth oo hadda 91 jir ah.
Sidaas waxaa shaaca ka qaadday idaacadda BBC oo sheegtay in arrinta oo ka hadalkeedu ka baxsanyahay dhaqanka boqortooyada (Taboo) looga doodayo kulan saraakiil sare oo Ururkaas ka tirsan uga socda London.
Ururka ‘Commonwealth of Nations’ oo ka dhashay raqdii burburka Imberadooriyaddii Britishka waxaa xubno ka ah 53 dal oo badankooda Britain horey u gumaysan jirtay, kuwaas oo hadda ka arrinsanaya mustaqbalka Ururka.
Ilowareed ayaa BBC-da u sheegay in cidda beddeli doonta Boqoradda, walow wax laga xumaado ay tahay, la soo gaaray wakhtigii laga hadli lahaa.
Sababta loo wajahayana waa iyada oo Guddoomiye-nimada Commonwealth dhaxaltooyo ahayn, sidaa darteedna ayan si toos ah ugu gudbi doonin cidda leh dhaxalka Boqortooyada Britain.
Prince Charles marka uu noqdo Boqor wuxuu Madaxweyne qaran (Head of State) u ahaan doonaa 15 dal oo qur ah oo ka mid ah 53ka dal ee ku bahoobay Ururka Commonwealth, wuxuuna u muuqdaa shakhsiga ugu habboon, haddii isagu aanu ka tanaasulin.
Elizabeth II waxaa Guddoonka Commonwealth loo magacaabay sannadkii 1953kii oo ku beegan markii loo caleemasaaray Boqornimada Britain.